Kuzovela indawo yokulungisa imifino ePerm Territory - "Potato System"
main Ukuphinda usebenzise kabusha
Kuzovela isitshalo esisebenza ngemifino endaweni eyi-Perm
в Ukuphinda usebenzise kabusha
Umqalisi wephrojekthi, i-UralOvosch Company, uhlela ukusebenzisa ama-ruble ayizigidi ezingama-30 kulokwakhiwa. utshalomali lwakho siqu kanye nama-ruble ayizigidi ezingama-170. wakhanga imali.
Emhlanganweni woMkhandlu Wezamabhizinisi Nokuqhakanjiswa Kwesimo Sezulu, obuholwa yinhloko yePerm Territory Dmitry Makhonin, abaphathi besifunda bakwesekile ukwakhiwa kwesakhiwo esiluhlaza kanye nesitshalo sokulungisa imifino edolobhaneni laseGamovo. Ngesinqumo soMkhandlu, lo mkhiqizo omusha wanikezwa isimo sephrojekthi yokutshala imali kuqala.
“Indawo eyi-Perm kufanele isebenzise kahle umhlaba wezolimo. Ingxenye yesifunda sikamasipala wePre, lapho kuzosetshenziselwa khona lo msebenzi, ihloselwe ukutshala imikhiqizo yezolimo, ngakho-ke isinqumo sokunikeza isimo esibaluleke kakhulu sinengqondo. Lokhu kuzovumela ukuthi umtshalizimali afake isicelo somhlaba kamasipala ngaphandle kokubhida, ”kusho uDmitry Makhonin.
USher Soibov, umsunguli wephrojekthi, ongumsunguli we-UralOvoshch Company LLC, uthe kuhlelwe ukuthi kwakhiwe isakhiwo sokukhiqiza sanamuhla sokukhula, ukucubungula, ukupakisha nokugcina imifino endaweni yezindawo zasemakhaya zaseGamov. Ukuqala ukusebenza kwezinhlelo lezi, amahektha womhlaba angama-392 azoqashiswa, kuthi iningi lawo (amahektha angama-376) ebaleni elivulekile lizokhulisa amazambane, iklabishi, izimbiza, izaqathe, futhi namakhukhamba, utamatisi, imifino izotshalwa ezindaweni zokugcina izithombo. Umhlaba osele (amahektha ayi-16) uzokwakha izingqalasizinda nezindawo zokukhiqiza. Phakathi kwazo - isitshalo sokucubungula, ukupheka nokufakwa kwezimpahla zemifino, isitoreji semifino esinamathani ayizinkulungwane eziyishumi nendawo yokugcina impahla yemikhiqizo eseqediwe.
Ngokwabaqalisi bephrojekthi, lo mkhiqizo omusha uzovumela ukuhlinzeka ngemikhiqizo ye-Perm hhayi esifundeni se-Kama kuphela, kodwa nakwezinye izifunda zaseRussia. Ngasikhathi sinye, njengoba inkampani ye-UralOvoshch iqinisekisile, ukuqaliswa ngempumelelo kwephrojekthi ngeke kuthintwe enye iphrojekthi yokutshala imali phambili kwezolimo “esifundeni” esifundeni - i-Permsky greenhouse complex eChusovoy.
"Umehluko obalulekile webhizinisi lethu ekwakhiweni kwezindawo esizisebenzelayo, kanye nasekubambisaneni nomphakathi wesayensi wasePree State Agrarian and Technological University (PSATU)," kusho umsunguli wale nkampani.
Njengoba kuphawuliwe yisazi sokufunda ngezinkanyezi sase-LLC "UralOvoshch" Galina Efremova, ososayensi bale nyuvesi bazosiza ukusebenzisa ubuchwepheshe obukhulu kakhulu bokulima umhlaba, ukukhula nokugcina imifino. “Sizosebenzisa nezinhlobo zemifino zesimanje kakhulu. Sesiqalile iziteshi zokuthengisa zemikhiqizo yethu, ”egcizelela.
Ukutshala imali okuphelele kwephrojekthi kungama-ruble ayizigidi ezingama-200, kuthi ama-ruble ayizigidi eziyi-15 (ama-ruble ayizigidi ezingama-30) abanikazi benkampani abahlela ukuyisebenzisa ngezimali zabo, ama-85% (ama-ruble ayizigidi eziyi-170) - imali ekhangayo. Ngemuva kokufinyelela umthamo wokwakhiwa, abakhiqizi bezolimo bahlela ukukhiqiza amathani ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili zemifino emhlabathini ovulekile, amathani ayizinkulungwane ezingama-8 zemifino emhlabathini ovaliwe namathani angaphezu kwezinkulungwane ezingama-150 esetshenzisiwe, imifino ebunjiwe emaphaketheni okugcotshwa.
Iphrojekthi kulindeleke ukuthi iphothulwe ngonyaka wama-2024. Njengomphumela wokuvulwa komkhiqizo omusha wezolimo esifundeni sikamasipala, kuzokwakhiwa imisebenzi engama-107.
I-LLC "Inkampani UralOvoshch" ibisebenza kusukela ngonyaka we-2016 futhi ibandakanyeka ekuhlinzekeni ngemifino ukudayisa ngamaketanga nezinhlangano ezithengisa izinto ezweni laseProvince Territory nakwezinye izindawo. Ngonyaka owedlule, imali evela ekuthengisweni komkhiqizo inyuke ngaphezulu kuka-50% futhi ifinyelela kuma-ruble ayizigidi ezingama-300.
Source: Iwebhusayithi yoMbusi noHulumeni wePerm Territory
Tags: ukucubungula imifinoIsifunda se-Perm
Isikhonyane, ama-aphid, amabhu okugcoba, nezindawo zokusanhlamvu. Izinambuzane eziphezulu zesizini ka-2020